TimesZBAN Nguva uye İZBAN Timetable 2020 | RayHaber | raillynews
mushaTURKEYTurkish Aegean Coast35 IzmirİZBAN Nguva uye İZBAN Timetable 2020
İZBAN Nguva uye İZBAN Timetable 2020
22 / 05 / 2020 35 Izmir, Commuter Trains, Railway, Turkish Aegean Coast, GENERAL, KENTİÇİ Rail Systems, musoro wenyaya, TURKEY
izban times uye izban ndege
İZBAN ndeimwe yemigwagwa yakakura kwazvo-kutakura njanji munyika yedu inopa mabasa pamutsetse wepasi pakati peAliağa Selçuk uye yakabatana nendege yenyika yedu. Huwandu hwemashopu emota yekufambisa yekukurumidza, ayo ane makumi ezviuru zvevashanyi zuva rega rega, akasimuka kusvika makumi matatu nemasere kuvhurwa kweHilal, uyezve kusvika makumi matatu nemasere nekuvhurwa kweTorbalı mutsara.
136 makilomita Ivo vese vakaremara kupinda pane İZBAN mutsara 41 chiteshi. Kubva kuchamhembe kuenda kumaodzanyemba nenzira iyi
zviteshi. Alaybey, Karşıyaka, Nergiz uye Şirinyer zviteshi pasi pevhu, zvimwe zviteshi zviri pamusoro pevhu.
İZBAN Shanduko Nzvimbo
Kubva kuHalkapınar neHilal zviteshi kusvika İzmir Subway; Mabhazi anogona kutamiswa kubva kuAlsancak, Bicerova, Cumaovasi, Cigli, Egekent, Esbas, Halkapinar, Hatundere, Kemer, Mavisehir, Menemen, Salhane, Sarnic, Dunhu Garage, Sirinyer, Turan uye Ulukent. Adnan Menderes Airport inogona kusvikwa kubva kuchiteshi chezita rimwechete kuenda kumaodzanyemba emutsara. Alaybey, Alsancak, Halkapınar uye Mavişehir zviteshi zvinogona kuendeswa kune tram mitsara.
İZBAN Expedition Maawa 2020
Expedition Nguva: 05: 20
Kusvika Nguva Yekupedzisira Chiteshi: 01: 23
İZBAN inovhura nguvai?
İZBAN, iyo inoshanda pamutsetse wepasi pakati peAliağa neSelçuk, inovhura na05.20 pakati pevhiki. Maawa anogona dzimwe nguva kusiyanisa panguva yezororo revanhu.
İZBAN inovhara nguvai?
İZBAN, iyo inoshanda pamutsetse wepasirese pakati peAliağa neSelçuk, inovhara pa01.23 mukati mevhiki. Maawa anogona dzimwe nguva kusiyanisa panguva yezororo revanhu.
İZBAN, inoshanda mutsetse we136 km nechepakati pakati peAliağa neSelçuk, ine zviteshi makumi mana munzira. Inozivikanwa seNzvimbo yekuchamhembe pakati peAliağa neMenaemus, axis yepakati nepakati pakati peMenemiti neCumaovasi, uye axis yekumaodzanyemba pakati peCumaovası-Tepeköy-Selçuk.
İZBAN ndeimwe yemigwagwa mikuru yekutakura vanhu muTurkey nekubatana nendege, vachishandira pamutsetse wepasi pakati peAliağa neSelçuk.
IZBAN, iyo yakatanga rwendo rwavo rwekutanga kushanda mu30 muna Nyamavhuvhu 2010, yakavambwa neTCDD uye 50 kubatana kweIzmir Metropolitan Municipality. Iyo Kambani yainzi yakakodzera öd Best Collaboration "chikamu mune 3 chikamu neInternational Association of Public Transport (UITP) nekugona kwayo kusvika 225 zviuru zvinopfuura nevatambi nehunyanzvi hwakagadzirwa pamutsetse unofambisa ma2013 zviuru zvevaperekedzi pazuva.
Kuwanda kwenzvimbo dze İZBAN, iyo yakatanga kushanda ne 31 chiteshi, yakatanga kuwedzera kune 32 nekuvhurwa kweHilal uyezve ku38 nekuvhurwa kweTorbalı mutsara. Nekuiswa kwehutano uye neSelçuk zviteshi, huwandu hwemasisitimu hwakawedzera kune 40. Hilal ndiyo yechipiri nzira yekumisidzana ye İzmir Metro uye İZBAN mushure meHalkapınar uye yakapa mukana wakanaka kune vapfuura vanobva kuSouth nzira kuenda kuKonak Metro nekutamisira ku İzmir Metro. Nekuvhurwa kwenzira dzeDeveli, Tekeli, Beet, Kuşçuburun, Torbalı, Tepeköy, Sağlık naSelçuk, nhepfenyuro dzinotevera Cumaovası, 550 makiromita akawanikwa.
Mutsetse we İZBAN, unozosvika kuBergama kuchamhembe, uchasvika 185 kilometres kana chirongwa chapera.
Izmir Rail Systems Network Mepu
Mepu ye IZBAN
IZBAN Expedition Hours - Zvimwe zvebhazibharo nekuda kwekurohwa
Dzazvino İZBAN Maawa Okubhururuka Maawa Ndeipi Inguva Iri İZBAN Kuvhurwa? Yakavharwa Inguva Yei?
İZBAN Commuter System İZBAN Mepu uye İZBAN
Mega Transportation Mirayiridzo ye2020 yeIstanbul iyo inobvumirana neE2020 Olympic
East Express Nguva yekutanga 2020
Kwekuenda East Express uye East Express Bhazi Maawa 2020
Başkentray Nzvimbo uye Nguva dzezvinhu --azvino 2020
Maitiro Ekunyorera makumi matanhatu nemakumi mana emakore Ekufambisa Mvumo yeMaficha?
YHT Expeditions Kutanga Kubva 1 June ..! Iyi inguva Yokutanga
Istanbul, Izmir, uye Ankara Metro, İZBAN uye Tram Vakamira
Metro maawa muIzmir masikati manheru 15 maminitsi ose
Ndege dzeIİZBAN dzakasimuka nekuda kwechando
Vazhinji vavo vakaenda asi ndege dzeIzBAN dzichagara dziripo